Ugu Weyn Ee Bogatyr
Noocyada caanka ah ee miro-saarista: sharraxaad, talooyin ku saabsan daryeelka
Hadda waxaad arki kartaa geedka geedo caan u ah beerta beerta. Laakiin had iyo goor wax beertu way ka farxin kartaa milkiilaha. Waa maxay sababta? Sida xaqiiqda ah daryeelka geedku waa mid aan habooneyn. Ka hor intaadan dooran wax doorasho ah, waxaad u baahan tahay inaad barato astaamaha noocyada caanka ah. Xaqiiqdii, loogu talagalay cirifka cimilada ee gobolka taas oo ay horumarin doonto, halabuurka ciidda iyo meesha loo doortay in koritaanka waa mid aad u muhiim ah.
Waan helnaa fasalada ugu fiican ee basbaas macaan
Noocyo kala duwan iyo Beelaha oo ah basbaas macaan, kaas oo ku baxa gobolladeenna, ayaa dibadda laga soo saaray. Iyo qaar badan oo iyaga ka mid ah yihiin wax soo saar badan. Dabcan, waxay u baahan yihiin daryeel dheeraad ah, laakiin bannaanka u yihiin ma baqayaan. Laakiin badankoodu waxay doortaan noocyo noocyo ah oo aan u baahnayn dayactir taxaddar leh.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Bogatyr 2020